UThulkana Palan – The Ulwazi Programme
UThulkana Palan wazalelwa eMzinto ngo-1933 wathuthela eThekwini ngo-1963 eneminyaka engu-30 ubudala. Ngemuva kokuhlala isikhashana e-Clairwood, wathuthela e-Havenside, e-Chatsworth, lapho esehlale khona iminyaka engu-52. UPalan ubengomunye wezelamani ezingu-12, kodwa bekunguye yedwa ingane efundayo amabanga aphakeme waqeda umatikuletsheni. Njengomntwana ophakathi abafowabo abancane baya emsebenzini ukuze bakhokhele imfundo yakhe yamabanga aphakeme wathola umfundaze wesikole wokuqedela i-Junior Certificate kanye ne-Senior Certificate
Ngesikhathi esemncane ,esemusha waphoqeleka ukuthi asebenze epulazini ngesikhathi samaholide okuvalwa kwezikole. Ukube wenqaba ukusebenza, umndeni wakhe wawuzosongelwa ngokuxoshwa epulazini. UThulkana Palan ungowesizukulwane sokuqala saseNdiya eNingizimu Afrika. Ubaba wakhe wafika eNingizimu Afrika ngo-1907 eyisisebenzi esisebenza ngokuzikhandla ezosebenza emapulazini omoba e-South Coast. Umsebenzi wokuqala kaPalan waba njengomabhalane embonini yezimoto, esebenzela umshayeli wepaneli. Ufunde izifundo ezahlukene eqeqeshwa wagcina esesigabeni sokubangumphathi. Ngo-1978, uPalan waqala inkampani yezakhiwo ngokubambisana nomngani wakhe, wabhala izivivinyo zokuqala zomphakathi zabathengisi bezindlu. Ubephethe inkampani yakhe yezakhiwo, i-Statesman Estates, iminyaka engu-23, wathatha umhlalaphansi ngo-2001.
Ngenxa yokungahanjiswa kahle kwezidingo nokwelashwa elokishini elisha uPalan waqala umsebenzi womphakathi. Ubeyilungu nomsunguli w-eHavenside Civic Association, esebenza njengosihlalo izikhawu ezintathu ezithatha iminyaka engu-25, futhi manje ukuphela kwelungu nomsunguli osasele, eminyakeni engu-51 kamuva. Iminyaka engu-13 kusuka ngo-1971 kuya ku-1984, uPalan wasebenza eKomitini Lezindaba Zasekhaya leNingizimu yeTheku futhi waba ngusihlalo iminyaka emithathu kusukela ngo-1980 kuya ku-1983. Ubuye wakhonza iphalamende elizimele kusukela ngo-1984 kuya ku-1994, ekhethwa njengengxenye iqembu lokuqala ukukhonza eNdlini Yezithunywa, phecelezi i-House of Delegates. Ngemuva kokuqeda umsebenzi wakhe wasephalamende, uPalan wasebenza emkhandlwini wesikhashana eThekwini wabe eseqokelwa ukuba yikhansela lesigceme kuWadi-69 ngo-1999. Wasebenza njengekhansela lesigceme iminyaka eyishumi nantathu waze wathatha umhlalaphansi ngo 2011. Umsebenzi wakhe omningi womphakathi nokusebenza kwe-Havenside Civic Association yenza uPalan ekuxhumaneni ngqo nezinkinga ezithinta umphakathi, ezamenza wakwazi ukubhekana nezidingo zomphakathi. Wabamba iqhaza elikhulu ekusungulweni kwe-Federation for Civic Association in Chatsworth ngo-2010 futhi waba ngusihlalo onngumsunguli iminyaka emihlanu waze wathatha umhlalaphansi ngomhlaka-11 Juni 2015.
Phakathi kwemiklomelo eminingi anikezwe yona uPalan ngeminyaka yakhe yokusebenza ngokuzinikela iminyaka engu-50 yokubamba iqhaza kwi-Havenside Civic Association eyasungulwa nguye ngosuku lwakhe lokuzalwa lwwminyaka engu-80 , futhi njengesincomo esivela e-Oceanview Readiness ‘Pre-school lapho uPalan asebenza khona njengosihlalo iminyaka engu-24, kwazekwathatha uMnyango Wezemfundo.
Yize abanye abantu besakhombisa ukumcwasa ngokuzibandakanya neNdlu Yezithunywa kanye nephalamende elinezinhlangothi ezintathu, isiqubulo sikaPalan sasith “fight the system from within”. Ngozi-13 Mashi 1985 wahambisa isiphakamiso sokuba iphalamende livimbe ukuthi zingabhidlizwa izindlu ezingu-13, nokuthi indlela yesibili engena e-Chatsworth idlule e-Coedmore. Umzila wokungena wesibili awuzange usebenze futhi ekugcineni iPhini likaNgqongqoshe Wezokuthutha ngaleso sikhathi labheka enye indlela eshibhile ngokunweba eminye imizila. Ekuqaleni kuka-1970 kwakungekho sikhungo sezitolo e-Havenside. UPalan namalungu e-Havenside Civic Association bethule emahhovisi oMnyango Wezindaba ZaseNdiya ukuze kubhekwe ukuthi kuvunyelwe ukwakhiwa kwenxanxathela yezitolo. Ekugcineni ngokumelwa ePhalamende wanikezwa igunya lokuthuthukisa umhlaba wenxanxathela yezitolo. Babephonsela inselelo imithetho nenqubomgomo yokuhlelwa kwamadolobha ngaleso sikhathi. Ngesikhathi sobandlululo, ukuba ngumNdiya endaweni enamaNdiya kwakungathishu ngaphandle kokuthi kube iziphathimandla (umkhandlu) eziza nomhlahlandlela. Ukuba awubuzanga wayilwela, bekungeke kwenzeke.
UThulkana Palan uthathe umhlalaphansi kwezepolitiki ngo-2011, kepha usabandakanyeka emsebenzini womphakathi osebenza kumakomidi namabhodi amaningi. Njengamanje usebenza kwiBhodi Yezokuphatha ye-Chatsworth Child Welfare, futhi uyilungu elikhuthele le-Friends of RK Khan Hospital, lapho asiza khona ngezinkinga ezithinta umphakathi nabaphathi besibhedlela, usiza ukuxhumanisa ukwabiwa kwemithi yeziguli yezifo ezingamahlalakhona. UPalan ubuye abandakanyeke kumaKlabhu ama-Senior Citizen amaningi e-Havenside nase-Bayview lapho asiza khona ngamaphrojekthi futhi anikeze nosizo lwezezimali.
Ngaphandle kokuba yilungu lokuqala le-Havenside Civic Association kanye ne-Federation for the Civic Association eChatsworth, ubuye wasiza enkuliseni yomphakathi iminyaka engaphezu kwamashumi amabili saze sathathwa uMnyango Wezemfundo.
Manje uThulkana osethathe umhlalaphansi usebenzisa isipiliyoni sakhe seminyaka ukusiza abahlali ngezinkinga zansuku zonke. Endaweni uthathwa njengo-sadhu, uyilungu elithembekile lomphakathi, usiza abantu ngayo yonke into kusuka kwizicelo zempesheni kuya ekugcwaliseni imibhalo yezicelo zomhlaba.
Abantu abanjengoThulkana Palan abaguqula imigwaqo nezakhiwo zibe omakhelwane nemiphakathi, abantu bezizwebesekhaya.
Categories People Tags Thulkana Palan
Imidlalo Yakudala Yezingane